Friday February 21, 2020 - 14:27:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sida la ogyahay qaran kasta oo dunida ka taagani waxa uu leeyahay mabda' iyo u jeeddo u adeega danaha shacabkiisa iyo himiladooda fog. Haddaba waa in la ogaadaa in dunida casriga ah lagu tartamayo dhisidda maamul ilbaxnimo ay lafdhabar u tahay w
ilbaxnimada dadka qaar waxay u fahmeen si leexsan oo ah in ciddii gummeysiga la shaqeysaa ay ilbax tahay, waa sababta gumeysigu marwalba ciddii la socota uu ugu tilmaamo ilbax kuwa ka soo horjeedana ugu sheego argagixiso dadka ka dambeeya.
Bilaa xikmad iyo dhammaan weedhaha liidnimada tilmaama oo dhan Haddaba ilbaxnimo marka si dhab ah loo fasirayo waa in dadku marka ugu horreysa ay xor yihiin kadibna waa in ay ka hormaraan dhinacyo kala duwan sida dhaqanka, dhaqaalaha, waxbarashada, siyaasadda iyo hab maamulka. dalna ma hormari karo isaga oo aan xor ahayn haddii kale weligiiba waxa uu ahaadaa qof wax loo yeedhiyo oo aan taladiisa lahayn.
Ilbaxnimada aynu soo sheegnay waata sababtay in dadku ku hardamaan ballaadhinta ilahooda dhaqaale sida beeraha, dekedda, waddooyinka iyo isku xidhka gaadiidka. Itoobiya oo aynu ognahay sida ay ugu dadaasho inay ahaato ta kaliya ee wax laga weydiiyo geeska afrika ayaa waxa ay maalmihii u dambeeyay iska dhigaysay mid rabta in ay wadahadashiiso maamulka dawlada federaalka iyo kan somaliland.
Waxa aad looga dareemay geyiga soomaalida imaanshaha farmaajo iyo Abiy Axmed ee Hargeysa taas oo buuq badan dhalisay. Akhristow ogow in xaaladaha siyaasadeed la abuuro si dadku uga jeestaan hadba waxa lagu foogganyahay oo aaney u ogaanin dhagarta loo maleegayo.
Waxa la sheegaa in waagii waxa loogu yeedho koobka adduunka lagu qabtay koonfur afrika ay siyaasad weyni ka dambaysay oo la rabay in shirkado reer galbeed ay gurtaan macdanaha dalkaasi hodanka ku yahay. Hadda falanqeyn badan oo baraha bulshada aad uga socotay kadib waxa si dhuumasho ah Hargeysa ku yimid wasiirka maaliyadda ee itoobiya Axmed Shide oo ilo dhow dhowi ay rumeysan yihiin inuu Muuse biixi kala hadlay sidii itoobiya u maalgashan lahayd dekedda istaraatiijiga ah ee Zeylac.
Taas oo la sheegay in Muuse Biixi bilaa shuruud ku aqbalay maadaama maamulkiisa ay lasoo darseen dhaqaalo xumo baahsan iyo cakirnaan siyaasadeed. Muuse oo sheegay in markii uu Abiy lasoo hadley uu degdeg u tagay waxa ay tilmaameysaa cakirnaanta siyaasadeed ee soo wajahdey iyo sida uu isaga gadayo xabashida.
Dekedda Zeylac oo ah meelihii weligood ay aadka ugu hirdami jireen muslimiintii Zeylac iyo boqortooyooyinkii nasaarada xabashida ayaa lala rabaa in ay noqoto meel shisheeye u xidhan.
Soomaalida oo ah ummad aan dagaalada lagu jebin qarni kasta oo la joogona laga helo koox halganta ayaa la odorosayaa in aan xabbad lagaga adkaan karin balse looga adkaan karo khiyaamo ay dabadhilifyo wejiga soomaali uga eeg maankana axmaaro ka ahi sameeyaan.
Ugu dambeyn qoraalkeygan waxa aan kusoo koobayaa in dadka soomaaliyeed aanay ku kadsoomin been abuurka siyaasadeed oo ay diintooda iyo dadnimadooda ilaashadaan. Waligeedna lama arkin waddan cadawgiisa mideeya oo wanaagooda ka taliya. Xabashi baa soomaaliya dawlad ka dhisaysa waa dameer geeso yeeshay.